Jereo ny toerana fitobiana dimy tsara indrindra any Catalonia | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | zavatra ilaina, España, General
Na dia tsy afaka manao dia lavitra aza isika amin'izao fotoana izao, azo antoka fa ho afaka tsy ho ela, noho izany dia tsara ny mitady hevitra samihafa hahitana an'izao tontolo izao. Amin'ity tranga ity dia ho hitantsika izay toerana fitobiana tsara indrindra any Catalonia, miaraka amina fisafidianana tsotra izay afaka manampy anao hahita trano honenana amin'ny vidiny lafo eo amin'ity fiarahamonina ity.
ankehitriny misy ny tobin'ny toby izay manome antsika ny karazana fampiononanaNoho izany dia tsy toeram-ponenana intsony izay misongadina amin'ny vidiny lafo fotsiny, fa safidy tsara izany rehefa mitady trano honenana. Hojerentsika hoe iza no tobim-pilasiana tsara indrindra any Catalonia raha sanatria izany no halehanao manaraka.
4 Tobin'ny Green Meadow
Ity toby mahafinaritra ity dia any Punta Falconera, ao an-tanànan'i Roses, iray kilometatra monja miala ny morontsirak'i Santa Margarida. Sahabo ho fito-polo kilometatra miala ny seranam-piaramanidina Girona. Ao amin'ny Any ivelan'ny toby misy toeram-pilalaovana ary koa dobo lehibe roa misy toerana filentehan'ny masoandro. Toerana mety indrindra ho an'ny fianakaviana izy io ary manana trano fisakafoanana, amin'izay tsy mila mivoaka hitady serivisy hafa izahay. Azo atao ny mijanona amin'ny bungalow feno miaraka amin'ny haingon-trano maoderina izay misy ny zava-drehetra, manomboka amin'ny faritra fandraisam-bahiny ka hatramin'ny lakozia feno, efitrano fatoriana sy fandroana maromaro. Manakaiky ny faritra amoron-dranomasina koa ny hahafahana mankafy ity toerana ity raha tsy tianao ny handany ny andro ao amin'ny pisinina. Ho an'ireo izay maniry azy dia misy ihany koa toerana ho an'ny lay eo amin'ny toby. Ireo trano ho azy ireo dia manana olona mahatratra hatramin'ny enina.
Avy amin'ny faritra amoron-dranomasina mankany amin'ny faritra tendrombohitra izahay, nanomboka tamin'io ny toby dia any La Guingueta, ao amin'ny Lleida Pyrenees sahabo ho 30 kilometatra miala an'i Sort. Ity toerana fitobiana ity dia misy bungalow voaomana tsara ho an'ny olona enina. Fanolorana fanamainana biolojika, zavatra ilaina mandritra ny ririnina, izay matetika koa dia vanim-potoana avo amin'ity faritra ity. Ny kabine dia vita amin'ny hazo ambanivohitra miaraka amina fomba tendrombohitra mahafinaritra, izay ahazoana aina kokoa. Ankoatr'izay, eo amin'ny toby misy tobim-pisakafoanana mafana, trano fisakafoanana ary faritra fisakafoanana any an-toby. Amin'ny manodidina ianao dia afaka manao hetsika isan-karazany toy ny làlan'ny bisikileta an-tendrombohitra, fitsangantsangana na ski amin'ny fizaran-taona.
Ity toby fitobiana tsara sy maoderina ity dia miorina ao Castelló d'Empúries akaikin'ny renirano ary metatra vitsivitsy monja miala ny moron'ny Sant Pere Pescador. Trano fonenana mamirapiratra ireo trano fonenana, malalaka be ary manana faritry ny lavarangana misy ny fahitana ny renirano. Eto amin'ity toerana ity isika dia afaka miaina traikefa an-dasy mety tsara nefa miaraka amin'ny fampitaovana lehibe sy ny rivo-piainana mahafinaritra. Ao anatin'ny trano itoerany koa dia misy faritra kely ao an-dakozia hikarakarana sakafo. Ny hevitry ny glamping dia ny tsy fivadihana amin'ny fomba fitobiana, miaraka amin'ny lainy sy fomba fiaina tsotra kokoa, fa miaraka amin'ny fampitaovana lehibe izay mahatonga ny fijanonana ho mora kokoa ho an'ny fianakaviana sy ny vondrona namana.
Tobin'ny Green Meadow
Ity toby fitobiana ity dia any Vilamòs, any amin'ny faritra be tendrombohitra misy ny lanezy amin'ny ririnina. Nahita toby iray hafa izahay izay misy kabine an-tendrombohitra tsara hipetrahana miaraka amin'ny fianakaviana. Ny bungalow dia misy efitrano fatoriana telo ary manana olona valo farafaharatsiny. Manana hafanana afovoany izy ireo, efitrano fandraisam-bahiny misy sofa, sy lakozia feno. Tsy misy tsy fahampian'ny fampitaovana ao amin'ity toby mahafinaritra ity miaraka amin'ny tandavan-tendrombohitra. Ny tobin'ny toby koa dia manolotra trano fisakafoanana sy fisakafoanana izay ahafahanao manana lovia matsiro ary na mofo vaovao aza. Any ivelany dia misy kianja filalaovana lehibe ary koa faritra barbecue midadasika ahafahanao manao sakafo any ivelany ho an'ny ankohonanao manontolo. Amin'ny manodidina dia afaka manao hetsika isan-karazany any ivelany ianao toy ny fitsangantsangana na bisikileta.
Ity toerana sarotra ity dia toerana fialantsasatra lehibe natao ho an'ny fianakaviana iray izay anisan'ny toby tsara indrindra any Catalonia. Izy io dia manana toeram-pialofana isan-karazany misy fahaiza-manao samihafa, na dia azo atao aza ny mijanona ao amin'ny efitrano. ny Ny bungalow dia voatendry tsara, miaraka amin'ny faritra ipetrahana misy sofa, lakozia, efitra fandroana ary faritra misy terrasika, voaravaka amin'ny fomba maoderina sy tsotra. Ity toeram-pialan-tsasatra ity koa dia manome fialamboly betsaka ho an'ny fianakaviana iray manontolo, satria misy dobo filomanosana efatra, ny iray amin'izy ireo miaraka amin'ny faritra fialan-tsasatra mahafinaritra miaraka amina fiaramanidina sy hydromassage. Amin'ny iray hafa dia misy sary mihetsika mba hifalian'ny kely indrindra amin'ny fianakaviana. Ity toerana sarotra ity koa dia misy serivisy hafa miaraka amina trano fisakafoanana manao buffet miaraka amina sakafo iraisampirenena, faritra fivarotana lehibe ary cafeteria. Any Salou no misy azy, akaikin'ny moron-dranomasina ary manana ireo fitaovana rehetra ireo ho fialan-tsasatra mahafinaritra miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ireo toby 5 tsara indrindra any Catalonia